UNICEF hamatsy ny Vondrona afrikanina miaraka amin'ny vaksiny miisa 220 tapitrisa amin'ny vaksinin'ny J&J COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » UNICEF hamatsy ny Vondrona afrikanina miaraka amin'ny vaksiny miisa 220 tapitrisa amin'ny vaksinin'ny J&J COVID-19
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fifanarahana teo amin'ny UNICEF sy Janssen Pharmaceutica NV dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny Advance Purchase Commitment (APC) nosoniavina teo amin'ny Africa Vaccine Acqu acquisition Trust (AVAT) sy Janssen tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity.
Janssen Pharmaceutica NV hanome hatramin'ny 220 tapitrisa fatra ny vaksinin'ny D&J ho an'ny rehetra 55 mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina amin'ny faran'ny 2022.
Ny fifanarahana dia niantoka safidy iray hanafarana dosie 180 tapitrisa hafa, izay nahatonga ny fidirana ambony indrindra hatramin'ny fatra 400 tapitrisa tamin'ny faran'ny 2022.
Ny vaksinin'i Janssen COVID-19 dia nahazo lisitra fampiasana vonjy maika WHO tamin'ny 12 martsa ary miankina amin'ny tambajotram-pamokarana manerantany hamokarana ilay vaksininy.
UNICEF dia nanao sonia fifanarahana miaraka amin'i Janssen Pharmaceutica NV mba hanomezana doka 220 tapitrisa amin'ny vaksinina tokana J&J ho an'ny fanjakana 55 mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina (AU) amin'ny faran'ny 2022. Dosis 35 tapitrisa no hatolotra amin'ny faran'ity taona ity.
Ny fifanarahana teo UNICEF ary Janssen Pharmaceutica NV dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny Advance Purchase Commitment (APC) nosoniavina teo amin'ny Africa Vaccine Acqu acquisition Trust (AVAT) sy Janssen tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity. Io fifanarahana io dia niantoka safidy iray hanafatra dosie 180 tapitrisa hafa, izay nahatonga ny fidirana ambony indrindra hatramin'ny fatra 400 tapitrisa tamin'ny faran'ny 2022.
Nanangana ny AVAT ny Vondrona Afrikanina tamin'ny Novambra 2020 mba hanaterana vaksinin'ny COVID-19 any amin'ny kaontinanta afrikanina, ary tanjona ny hanaovana vaksininy 60 isan-jaton'ny mponina tsirairay ao amin'ny firenena AU. Eo ambanin'ilay drafitra, ny Banky Afrikana Export-Import (Afreximbank) sy ny AVAT dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny anaran'ny AU ho fampandrosoana ny Framework Advance Procurement Commitment (APC) hanohanana ny fidiran'ny mpikambana mpikambana amin'ny vaksinin'ny COVID-19. UNICEF dia hividy vaksiny COVID-19 amin'ny anaran'ny fandraisana andraikitra AVAT. Ny mpiara-miombon'antoka hafa dia ny Centres Africa for Disease Control and Prevention (Africa CDC) sy ny Banky Iraisam-pirenena. Raha vaksiny marobe no antenaina ho anisan'ny portfolio an'ny fandraisana andraikitra, ny vaksinin'ny dosia tokana Janssen no voalohany nampidirina.
“Ny firenena afrikanina dia tsy maintsy manana fidirana mora sy ara-drariny amin'ny vaksinin'ny COVID-19 faran'izay haingana. Ny fidirana vaksiny dia tsy mitovy ary tsy ara-drariny, miaraka amin'ny latsaky ny 1 isanjaton'ny mponina ao amin'ny kaontinanta afrikanina amin'izao fotoana izao no vita vaksiny manohitra ny COVID-19. Tsy afaka mitohy izany ”, hoy ny Tale mpanatanteraka UNICEF Henrietta Fore. "Ny UNICEF, miaraka amin'ny tantaram-piainany hatrizay nanaterana vaksiny erak'izao tontolo izao, dia manohana ny ezaka vaksinin'ny COVID-19 manerantany amin'ny alàlan'ny AVAT, COVAX, sy ireo fantsona hafa mba hampitomboana ny famatsiana sy ny fahazoana miditra amin'ny vaksiny."
Nahazo traikefa am-polotaona maro lasa mpividy vaksinina tokana lehibe indrindra eran-tany tahaka ny fanaony isan-taona amin'ny fanaovana vaksiny mahazatra, UNICEF dia miasa ho toy ny maso ivoho misahana ny asa sy logistik amin'ny anaran'ny fiaraha-miasa AVAT. Vonona ny UNICEF hanamora ny fividianana, ny fitaterana ary ny fandefasana vaksiny raha vantany vao misy izany ary vonona handray azy ireo ny mpikambana ao amin'ny mpikambana AU. Miaraka amin'ny fahaiza-manaony sy ny fahaizany am-polony am-polony maro amin'ny fitantanana entana, fiantohana ary fitaterana vaksinina izay mitaky fanarahana fatratra ny fepetra takiana mangatsiaka, hiara-hiasa amin'ny UNICEF amin'ny indostrian'ny vaksinina, ny mpitatitra entana ary ny orinasam-pitaterana hitondra ny fatra amin'ireo vondron'olona mila izany.